Zirconium Aluminium chiwanikwa, Zr-Al - Goodao Technology Co, Ltd.
General izwi rekugadzirira kana zvishandiso zvinonyatsotora mamwe mamorekuru egasi,
yaishandiswa kuwana kana kuchengetedza vharumu, uye kuchenesa magasi.
Chinese zita: zirconium aluminium alloy powder, zirconium aluminium 16 getter
Usazodaidze izvi: A degassing mumiriri
Inofanira kushandiswa: yemagetsi vharuvhu kugadzirwa kwechigadzirwa uye zvimwe zvimiro zvemainjiniya ekugadzira
Zirconium aluminium alloy powder inoshandiswa zvakanyanya mukutsvaira zvigadzirwa zvemagetsi, izvo zvinogadzira nzvimbo yakanaka yekushanda yezvigadzirwa, inogadzikisa hunhu hwemidziyo yezvinhu, uye ine simba rakakosha pakuita uye hupenyu hwebasa rezvigadzirwa.
(1) Munguva pfupi kuvandudza mudziyo wekutsvaira mudziyo (dappa pamusoro), muchigadzirwa mushure mekuvhara chisimbiso uye kukwegura kubvisa gasi rinosara uye rinobuditswazve, zvinoita kupfupisa nguva yekupedza;
(2) Chengetedza imwe dhigirii yekubvisa panguva yekuchengetedza uye mashandiro echishandiso;
(3) Kudzivirira mudziyo pakutanga uye zvisina kujairika basa reropa rakangoerekana, zvinonyatso chengetedza iyo cathode uye zvimwe zvinhu zvine mutsindo.
Zirconium - aluminium alloy powder isiri-evapotranspiration mhando getter yakagadzirwa nezvinhu zvinokurudzira zvine tembiricha yepamusoro yekupwa. Ichi chinotora hachidi evapotranspiration, asi chinofanirwa kumisikidzwa isati yave nekufemera zvivakwa. Kumisikidza zvinoreva kuti iyo inotomesa inopisa kuti ive nesimba rakasimba rekusimudzira.
Munguva yekumisikidza, gasi rinoburitswa neretera rinogona kubviswa nepombi yekutsvaira kana kuyamwa neiyo evapotranspiration Getter. Iyo inogoneswa isiri-evapotranspiration Getter inogona kuve inoshuvira muhuwandu hwakawanda pakushanda kwekushisa. Iyo isiri-evapotranspiration getter inotora iyo chubhu gasi muchimiro chekumwa kwepasi kwegasi uye kupararira kweiyo gasi mu getter. chikuru chinotora chinonyanya kushandiswa. Zvakadai se zirconium aluminium 16 getter zvichingodaro.
Yekushandisa munda Zirconium aluminium alloy powder tekinoroji ine mari, yakapusa, inoshanda uye yakasimba mukuwana yakanaka yekutsiva mhepo mukati mehubhu. Inoita basa rakakosha mukuvandudza uye kugadzirwa kwemagetsi emagetsi ekushandisa ane hupenyu hwakareba, kuvimbika kwakanyanya uye kuita kwakanyanya.
Haisi chete inoshandiswa zvakanyanya muvharidzi yemagetsi zvigadzirwa, senge yekugamuchira gudzazwi, magetsi machubhu, nhema uye chena kana ruvara TV pikicha pikicha, oscilloscope chubhu, kamera chubhu, yekufamba mafungu machubhu, fluorescent mwenje uye yakakwira-kumanikidza kuburitsa mwenje, nezvimwe. asiwo kuiswa kwechiedza cathode kugadzira, nyukireya magetsi, inodzorwa yenyukireya fusion chishandiso, gasi laser, isingawanzo gasi yekuchenesa, yakakwira vharuvhu, nezvimwe.
Pashure: Zirconium Nickel chiwanikwa, Zr-Ni
Zvadaro: Vanadium Aluminium Alloy, V-Al
Zirconium aluminium chiwanikwa Mafekitori
Zirconium aluminium alloy Fekitori
Zirconium aluminium alloy Mugadziri
Zirconium aluminium alloy Vagadziri
Zirconium aluminium chiwanikwa Mutengo
Zirconium aluminium alloy Quotes